Forexrobots24 | umeluleki we-forex umeluleki
umeluleki we-forex umeluleki
Vula ikhodi ye-EA
Indlela yokwenza imali ku-Forex
5 amaphutha ajwayelekile abathengisi
Ukunqunywa kwendlela engaba khona
Amasu wokuhweba kanye nokuhlaziywa kwezobuchwepheshe
Ukuhlaziywa Kwemakethe Yamasheya
I-Gold Price Outlook - I-Rally Isizwa yi-Positive Moving Average Crossover I-DOGE frenzy iyaqhubeka ngenkathi i-Bitcoin (BTC / USD) ibuyela emuva Isibikezelo Segesi Yemvelo: Amanani Akhuphuka Njengama-Cold Snap Angajwayelekile E-US Ephakathi Ukuvuselelwa kwe-FTSE 100: I-FTSE Idlula i-7000, ikhuphuka ngama-40% Kusuka ku-2020 Low Isonto Langaphambi Kwezimakethe: UDow Jones, Igolide, i-EUR / USD, i-ECB, i-USD / i-CAD, i-BoC, ne-Treasury Iyakhipha
1 unyaka edlule admin 4
1 unyaka edlule admin 2
Izinzuzo zokuhweba okuzenzakalelayo
1 unyaka edlule admin
Amasu wokuhweba athandwa kakhulu
Amathuluzi aphezulu wokuhlaziya we-7
1 unyaka edlule admin 3
Imisebenzi yethu izipho Forex amarobhothi ngokuhweba okuzenzakalelayo emakethe ye-Forex. Abethuli bezinhlelo sebethuthukisa isoftware yokuhweba i-forex (umeluleki, izinkomba, izinsiza) ye-Metatrader 4 iminyaka eyi-10.
Imakethe ye-Forex inenzuzo yansuku zonke yamadola angaphezu kwezigidi ezi-5. Imakethe ye-Forex inkulu kakhulu, ukuthi wonke umuntu angathola indawo kuyo. Singakusiza ekutholeni indawo yakho yenzuzo ekuhambeni kwemali kwe forex. Ungathola ukuzimela kwezezimali futhi uthole imali ephakeme njalo emakethe ye-Forex. Udinga ukufaka kuphela isoftware yethu yezobuchwepheshe ye-forex.
Abeluleki bethu be forex ukuhweba Automated kususelwa kuzimpawu zezinkomba ezahlukahlukene, ezihambisana nezindlela ezinzima komunye nomunye.
Esitolo sethu kunemikhiqizo ehlukahlukene enencazelo eningilizayo, izitatimende zomlando, amavidiyo e-youtube, izithombe-skrini, inzuzo kanye nezibalo zokudonsa. Sikhombe izithombe-skrini zangempela kusuka kumhloli wamasu nenye isoftware ekhethekile, lapho ungabona khona inzuzo, inani lamadili aphumelele, ukulahleka okungenzeka nokunye.
Bheka! Yeka ukuthi ama-ROBOTS AYAQALA kanjani ku-akhawunti yethu ku-VIDEO LIVE ngesikhathi sangempela!
Ungakwazi Ama-robot forex abanye abacebisi bethu ukubona ukuthi basebenza kanjani kumhloli wakho wezinhlelo ngezilungiselelo ze-akhawunti yakho.
Yini oyidingayo ekuhwebeni okuzenzakalelayo namarobhothi ethu:
Vula i-akhawunti yomthengisi noma usebenzise okukhona. Ungasebenzisa noma yimuphi umthengisi odumile.
I-PC, i-Laptop noma i-VPS ye-software yokuhweba (i-Metatrader 4) kusuka kumthengisi wakho (I-PC kufanele ibe kwi-inthanethi 24 / 5).
Ukuze uqinisekise ukusebenza kwehora le-24 we-Metatrader 4 sincoma lokhu Umhlinzeki we-Forex VPS:
Idiphozi yokuqala ku-akhawunti ye-broker yokuhweba.
Iphakethe labeluleki bezazi ezivela esitolo sethu kufanele lifakwe kwiMetatrader ngokusho ukufundisa ividiyo or Imibuzo Evame Ukubuzwa.
IMegastorm v.10.9 - Iphakethe le-EA lamabhangqa emali ayi-14
I-Belkaglazer - i-forex EA isuselwa kumasu amaningi
I-EA INDIGO TRADER 2020 - Irobhothi le-Forex lokuhweba okuzenzakalelayo
"I-Fox scalper" - I-Forex EA isuselwa kuzinkomba ezijwayelekile ezihambayo.
IGegatrade Pro - Umeluleki we-Forex ngokuya ngentengo emaphakathi
I-Golden bull Pro - i-scalper forex robot
I-robot ye-Forex yokuhweba okuzenzakalelayo ngokusekelwe ezinkomba ze-ATR ne-MA.
I-Keltner yesiteshi se-forex esiphezulu sokuhweba okuzenzakalelayo
I-robot ye-forex esekelwe ngosuku lonke lokuhweba okuzenzakalelayo ne-ADX indicator
Umeluleki we-Forex (i-robot) ngokusekelwe ngosuku lonke lokuhweba nge-intraday ngokuzenzakalelayo
Irobhothi le-Forex elisuselwa ohlelweni lokumisa nokubuyisela emuva
Umqeqeshi we-forex (robot) wezokuhweba okuzenzakalelayo okusekelwe ku-Scalping
Umeluleki wobuchwepheshe (robot forex) ukuhweba usebenzisa amasignali we-CCI
The umeluleki we-automated forex (irobhothi) isengezo esikhethekile sesoftware yokuhweba, lapho kubhaliswa khona i-algorithm ezenzakalelayo. Irobhothi le-Forex libhalwe ngolimi olukhethekile lwezinhlelo oluhambisana ne Metatrader 4 platform futhi efakwe esibulalayo for self-ukuhweba.
Uphi umeluleki wethu owaziyo ukuthi angayidayisa nini futhi kanjani? Kulula! Ku-algorithm yomsebenzi wakhe kufakwe isu lokuhweba esaliqamba futhi izinkomba ezikhethekile ze forex! Ngakho-ke, i-robot ye-forex ingumthengisi ochwepheshe.
Noma cha, i-robot iyakwazi ukudayisa kangcono kakhulu! Kusukela, akwazi ukukhathala, ukwesaba, ukungabi nalutho, ukungacabangi nokuhaha. I-robot igcwalisa ngokuqondile izimo zeqhinga lokuhweba elinikezwe kulo futhi lenze inzuzo!
Zingaki ama-robot e-Forex wokuhweba athola?
Ngokuvamile, ama robot e-Forex athola ngezikhathi eziningi kunabathengisi. Futhi konke ngenxa yokuthi:
- Umeluleki uhweba usuku lonke, okungukuthi, usebenzisa wonke amathuba okuhweba ngaphandle kokukhetha.
- Isazi se-Forex sisebenza ngokushesha okukhulu kunomuntu. Ngakho-ke, iphetha ngamadili ngentengo enhle kakhulu (ngaphandle kokulahlekelwa amaphuzu wenzuzo).
- Isazi esizenzakalelayo, ngokungafani nomuntu, singathengisa ngamasu wokuvama nokucacisa okuphezulu, okuletha kakhulu ngaphezu kwezinhlelo zokuhweba zakudala.
- Isazi sokuhweba asesabi umthwalo wengqondo, okuthi, njengoba kukhonjiswa, kunciphise inzuzo yokuhweba komuntu ojwayelekile. Isibonelo, i- Irobhothi le-scalper le-Forex uthole kuze kufike ku-50% inzuzo ngenyanga.
U-downloader mahhala (10)
Vula ikhodi ye-EA (4)
Ngabe ufuna ukuba nenzuzo namashadi anjalo? Khetha i-Megastorm yethu v.10.9 EA ngokuhweba emakethe ye-Forex ...
Vula i-akhawunti yokuhweba nomthengisi we-Forex othembekile:
Faka isofthiwe yakho ye-trader ku-server ye-VPS yomunye wabahlinzeki abakhulu okusheshayo:
Amarobhothi amahle kakhulu we-Forex nezimpawu
I-Gegatrade Pro - Umeluleki we-Forex ngokusekelwe kumanani aphakathi
I-Belkaglazer - i-EA EA esekelwe kumasu athile nguRoy Aridas
I-Belkaglazer - i-EA EA esekelwe kumasu athile. ISIVIVINYO SOKUVIVA ngu-Eugenia Parm
Imikhiqizo Okubukwe kamuva
Umeluleki wobuchwepheshe (i-robot forex) usebenzisa amasignali we-CCI, i-TEST VERSION $0.00
Inkunzi yegolide - ukukala irobhothi ye-forex. ISIVIVINYO SOKUVIVA $0.00
I-EA INDIGO TRADER 2020 - Irobhothi le-Forex ene-OPEN CODE (.mq4) $399.00
Umeluleki wobuchwepheshe (robot forex) ukuhweba usebenzisa amasignali we-CCI $49.00
ukuhweba Automated best forex robot I-ADX indicator ye-Forex umeluleki umxhumanisi we-forex CCI i-forex EA ngaphandle forex robot khulula thwebula i-forex robal scalper I-robot autotrading ye-autotrading mahhala Umzila we-Keltner wokuzulazula i-robot forex i-robot isilinganiso esiphezulu Spread indicator forex
I-Gold Price Outlook - I-Rally Isizwa yi-Positive Moving Average Crossover
amahora 2 edlule admin
Ukuhlaziywa Kwekhilogremu YaseBrithani: I-GBP / USD ne-GBP / JPY Kwangathi Kuphakama Njengoba Ukubheja Okufushane Kukhuphuka
amahora 9 edlule admin
Isibikezelo SeDola laseMelika: Guqula Okuphezulu Kungabhalwa Uma Izithelo ZaseMelika Zingasebenzi - Amaleveli we-DXY Index, USD / JPY
amahora 18 edlule admin
I-DOGE frenzy iyaqhubeka ngenkathi i-Bitcoin (BTC / USD) ibuyela emuva
amahora 19 edlule admin
Abalingani bethu: Isignal2forex.com, Forexfactory1.com
I-Click2Sell ingumthengisi othengisiwe ogunyaziwe we-Forexrobrobots24.com
Imigomo nemibandela (Inkontileka yomphakathi)
I-copyright © Wonke amalungelo agodliwe. | Forexrobots24.com
Isexwayiso Sezingozi: Iwebhusayithi i- Forexrobots24.com ngeke ithwale umthwalo wemfanelo ngokulahleka kwemali yakho ngokusebenzisa imikhiqizo ethengiwe kulesi siza, kufaka phakathi abeluleki bochwepheshe nezimpawu zezinkomba. Futhi noma yiziphi izintengo nezingcaphuno ze-Forex ezethulwe kubahlinzeki kungenzeka zinganembile futhi zingahluka kumanani wentengo uqobo, okusho ukuthi amanani ayinkomba futhi awalungele izinjongo zokuhweba. Kufanele uqonde mayelana nobungozi nezindleko ezihambisana nokuthengisa izimakethe zezimali, kungenye yezindlela zokutshala imali eziphuma phambili ..